Madaxweynaha oo hambalyeeyey Xilhibaanada Aqalka Sare iyo Guddoonka la doortay | Baydhabo Online
Madaxweynaha oo hambalyeeyey Xilhibaanada Aqalka Sare iyo Guddoonka la doortay
Madaxweynah Jamhuuriyaddda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Xildhibaanadda Baarlmaanka Aqalka Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo maanta doortay guddoomiye iyo ku xigeenadiisa koowaad iyo labaad.
Doorashooyinkii Guddoonka Aqalka Sare ee Baarlmaanka Federaalka Soomaaliya ee qabsoomay maanta, waxay muujinayaan sida dadka Soomaaliyeed ay ugu bisilaadeen siyaasadda leh hufnaanta iyo degenaanshiyaha. Waa tallaabo muhiim ah oo sahleysa horumar iyo horu-socod. Hambalyo ayaan leeyahay Guddoomiyaha iyo ku xigeenadiisa koowaad iyo labaad ee la doortayay maanta , waa masuuliyiin khibrad u leh xaaladda Soomaaliya, kartina u leh hoggaaminta, waxaana Allaah uga baryayaa inuu masuuliydaas cusub la garab galo ” ayuu yiri Madaxweynaha
Madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa ku ammaanay musharaxiintii kale ee tartaranka ka qeyb gashay sida kartida dheeraadka ah ee ay u aqbaleen natiijada doorashadii guddoonka Aqalka Sare ee maanta dhacday.
Ugu dambeyntii, Madaxweynah ayaa mahad-celin iyo hambalyo u jeediyey guddoonkii KMG ahaa iyo guddigii doorashada guddoonka Aqalka Sare ee Baarlmaanka oo si hufan ugu guuleeystay qabsoomida doorashada.